Hiran State - News: HS:- Ciyaar kubada cagta ah oo lagu maamuusayey 1-da Luuliyo ooka dhacday
HS:- Ciyaar kubada cagta ah oo lagu maamuusayey 1-da Luuliyo ooka dhacday
HS:-Ciyaar kubada cagta ah oo lagu maamuusayay munaasabada 1da luuliyo oo ah markii ay gobolada koofureed ka xuroobeen gumeeystihii talyaaniga islamarkaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo kuwa koofureed ayaa waxaa lagu qabtay xaafada islii ee magaalada Nairobi.
Ciyaartaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ciyaariyahan Khaliif Cali Axmed oo loo yaqaano Bagio waxaana ka soo qeyb qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee Soomaaliya u ciyaari jiray waayo waayo sida Macalin Basquale, Daahir Gacameey iyo Macalin Badal.
Sidoo kale waxaa garoonka soo camiray dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed oo iskugu jiray kyuo xiiseeya ciyaarta kubada cagta iyo dad ay kuweyn tahay maalinta loo dabaal degayey ee 1-da Luuliyo.
Ciyaartan ayaa waxa ay dhex martay labada kooxood ee kala ah Withworth Accadamy iyo kooxda Hiiraan Team waxana ciyaarta garsoorayay garsoorayaal kenyaan ah.
Ciyaarta oo aheyd mid ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar wanaag kooxkastana soo bandhigtay ciyaar ay kaka taqalusin karto kooxda ka soo horjeeda ayaa ku dhamaatay waqtigii loogu tala galay ciyaarta 1:1 .
Waxana ugu danbeyn leysla aaday gool ku laad ay 3:2 ku badiyeen kooxda Hiiraan Team ooi ah koox siweyn looga yaqaano Nairobi halkaasina lagu gudoonsiiyay koobkii lagu maamuusayay munaasabada 1da luuliyo.
Wariye Cilmi Mohemed Waare iyo suxufiyiin kale oo goobta ay ciyaarta ka dhacday goobjoog ku ahaa ayaa ku nuux nuuxsaday in ay labada kooxood ciyaar wanaag soo bandhigeen nasiibkuse racay kooxda Hiiraan Team.
Inta badan ciyaaraha kubada cagta waxey ka mid yahiin kuwa kaliya ee la rumeysan yahay iney mideeyaan bulsho markaasi sida Soomaaliya oo kale colaad ku soo jirtay mudo badan. inta taariikhda Africa la xasuusto dalka Ivory Coast oo mudo dagal ku jiray waxaa dhacday in xili dalka Masar lagu qabtay ciyaaraha koobka Africa ay qaranka wadankaas u so gudbeen ciyaartii Finalka aheyd kadibna ay shacabka wadankaas oo gobolada dalkaas qaarkood isku dilayey ay ku heshiiyeen inta ciyaaraha socdaan iney u midoobaan qadiyada dalkooda sidaasina mucaarad iyo muxaafid halmeel ku wada daawadeen ciyaartii, kadibna waxaa bilawday is dhaxgalkii dadweynaha oo aan horey u wanaagsaneyn.
Sikastaba waxaa la rumeysan yahay in aysan umada Soomaaliyeed iyagu ka dhaxeyn colaad soo jireen ah laakinse gacmo shisheeye oo dibadaa dhib ku hayaan taasi oo waqti dheer la waayey muwadin Soomaaliyeed ee dalka iyo dadka u kaca hadii la helana mid kale ayaa dadaalkiisa daba guraya.
Isku soo duuboo guud ahaan umada Soomaaliyeed 1-da Luuliyo waxey ugu dabaal degeen sanadkan meelkasta oo ay dunida ka joogeen.
· admin on July 03 2012 13:30:40 · 0 Comments · 3015 Reads ·
14,614,457 unique visits